जानिराखौँ महिलाहरु यस्ता यौ*न व्यवहार मन पराउँछन् – Asal Kura
गृहपृष्ठ जानिराखौँ महिलाहरु यस्ता यौ*न व्यवहार मन पराउँछन्
जानिराखौँ महिलाहरु यस्ता यौ*न व्यवहार मन पराउँछन्
वैशाख ५, २०७८ |
दम्पतीको हकमा यौ*न एक अनिवार्य र नियमित आवश्यक्ता हुन् । यद्यपि उनीहरुबीच यौ*नका विषयमा खुला वहस र परिचर्चा भने हुँदैन । यौ*न जीवनबारे एकअर्काको अनुभूति साझेदार गर्दैनन् । कस्तो किसिमको यौन व्यवहार रुचीकर लाग्छ भनी सोधीखोजी गर्दैनन् । मौन भाषाकै भरमा दम्पतीहरु यौ*न क्रियामा सहभागी हुने गरेका छन् ।
जबकी दम्पतीबीचको सम्बन्धमा यौ*नको खास भूमिका रहन्छ । जब यौ*न जीवन आनन्ददायक हुँदैन, दम्पतीबीच भित्र भित्रै असन्तोष पैदा हुन्छ । यसले विवाहेत्तर सम्बन्धको जोखिम समेत बढाउँछ । दम्पतीको यौन जीवन जति–जति खल्लो र अरुचीकर हुँदै जान्छ, त्यसले आपसमा अविश्वास, आशंका र असमझदारी समेत बढाइदिन्छ । कसरी यौ*न जीवनलाई आनन्ददायक बनाउने ? जीवनसाथीले कस्तो यौन व्यवहार रुचाउँछन् ? यौनमा चरमोत्कर्ष कसरी प्राप्त हुन्छ ? यौन क्रियाअघि र पछि के कस्ता व्यवहार आवश्यक वा उचित हुन्छ ? यस विषयमा सदियौंदेखि वहस र खोज हुँदै आएको छ । हाम्रा पूर्वजहरुले समेत यौ*न–जीवनको महत्वलाई बुझेर यसलाई थप रोमाञ्चक, व्यवस्थित र संयमित बनाउने विधीहरु पहिल्याएका छन् ।
यद्यपि अहिले पनि यौनका अनेक आयमलाई लिएर सोधीखोजी एवं खोज भइरहेका छन् । जस्तो केही समयअघि एक सर्वेक्षण भएको थियो, खासगरी महिलाहरुको यौ*न रुचीलाई लिएर । यौ*न सम्बन्धका क्रममा महिलाहरुले आफ्ना जीवनसाथीबाट कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् ? उनीहरुलाई के कुराले उत्तेजित बनाउँछ ? यौ*नमा उनीहरु कसरी आनन्दित हुन्छन् ? एक डेटिङ साइटले गरेको उक्त सर्वेक्षणबाट के थाहा भएको छ भने यौनलाई लिएर महिलाहरुको रुची परिवर्तन भइरहेका छन् । सहभागी ६२ प्रतिशत महिलाले ‘सफ्ट सेक्स’ भन्दा ‘रफ सेक्स’ रुचाउने खुलासा गरे । उनीहरुलाई परम्परागत ढर्राको यौ*न क्रिया त्यती रुचीकर लाग्दैन । यौनका क्रममा उनीहरु नयाँ नयाँ आसन भोग एवं अभ्यास गर्न चाहन्छन् ।
सवेक्षणमा के पनि पाइयो भने यौ*न क्रियाका क्रममा महिलाहरुलाई आफ्ना जीवनसाथीले कपाल तानेको मन पर्ने रहेछ । त्यस क्रममा जब जीवनसाथीले कपाल तान्छन्, उनीहरुको मुड अरु उत्तेजित र रमाइलो बनाइदिन्छ । ओछ्यानमा आफ्ना जीवनसाथीले नियन्त्रण गरेको पनि उनीहरुलाई आनन्ददायक लाग्छ । जीवनसाथीले सबैकुरा आफ्नै मर्जी अनुसार गर्न थाल्छन् वा नयाँ अभ्यास गर्न थाल्छन्, महिलाहरु रोमाञ्चक हुन्छन् । महिलाहरुलाई फरक एवं नयाँ यौ*न आसन रमाइलो लाग्छ ।
त्यसैगरी यौ*न सम्पर्कका क्रममा भद्दा संवाद गर्ने, शरीरका अंगमा टोक्ने जस्ता कार्य पनि कतिपय महिलालाई रुचीकर लाग्छ । यसबाट अर्को रमाइलो तथ्य पनि उजागर भएको छ । जानकारहरुका अनुसार पुरुषले शारीरिक सम्बन्धको समयमा महिलालाई दाँतले टोकेमा उनीहरुको शरीरको रक्तसञ्चार र मुटुको धड्कन बढ्छ । त्यसकारण उनीहरुले यौनबाट अझै बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् ।
पछिल्लाे - फ्लोर क्रस गरि पद जोगाइदिने तीन जनाले पाए मन्त्री पद
अघिल्लाे - सामसुङ ग्यालेक्सी एम ६२ बजरमा जानौँ मूल्य कति?